IFTIINKACUSUB.COM: Qisso cajiib ah: Ka waran haddii aad tahay qofka Dunida u foosha xun.
Qisso cajiib ah: Ka waran haddii aad tahay qofka Dunida u foosha xun.
Qofkasta oo inaga mida waxaa hubaal ah in uu jecel yahay in uu noqdo,qofka Dunida Ilahay abuurtay ugu quruxda badan,maalka badan,midabka fiican,amaanta badan, isla markaana aanay jirin cidkale oo isaga/iyada u dhiganta.
Maalinkasta oo Ilahay keeno waxaa dhici karta in qofkasta oo inaga mid-ahi ,uu qaybaha jidhkiisa ku dadaalo sidii uu u qurux badnaysiin lahaa,mariyana waxkasta oo uu isleeyahay waa ay ku quruxbadnaanaysaa,taasi oo uu wadaayo ilaa inta uu ka dhimanaayo;waayo kalsoonidarada sideedaba ina haysata,ayaanay inoo suura galinayn in aynu is qurxinta joojino.
Maaha wax la qariibsado/lala'yaabo ,in adoo qurux badan,dhamays ah aad hadana heli karto maal iyo Lacag, aanay jiraan haddaba dad sidaasi oo kale ah waxkastana Ilahay SW uu u dhameeyay,haddana ay ka maqan tahay kalsonidii ay naftooda ku qabeen.
Kalsoonidu waa shay qaali ah,waana shay aan lagu heli karin iib iwm,balse waa shay uu Ilahay bixiyo,haddii aad waxbadan ku dadaashana ay dhici karto in aad naftaada barto sidii ay kalsooni dhab ah u heli lahayd,balse taasi waxaa u sabab noqon kara Allah ka cabsi iyo Iimaan dhab ah.
Way inagu adag tahay in aynu kalsooni dhamaystiran aynu helno ,inaga oo ah dad faqiir ah,aan waxba haysan,foolxumana koobka qaaday ,arinkasta oo qofka bini'aadmiga ah lagu liidana ay agteena taallo.
Hadaba ma og tahay akhriste in uu Dunidan aynu ku nool nahay oo soo maray shakhsi iyo bashar Ilahay ku imtixaamay intaasi aynu kasoo sheekaynay iyo in kale oo kasii badan,hadana kalsoonida iyo geesinimada Ilahay siiyay ,waxaas oo dhan kaga gudbay.
Ninkii la odhan jiray Cadaa Ibnu Rabaax ;waxa uu ahaa shakhsi iyo bashar Ilahay u abuuray sifooyin iyo astaamo aad u layaab badan,waxa uu ahaa nin Madaw ah,xanuunka Faaliga qaba,Indhahiisu cawaran yihiin, Tomo adag,San balaadhan.
Ninkaasi la imtixaamay ee khayrka qabay ,waxa uu ahaa nin arimahaasi oo dhan dadka kaga soocan,waana arimo Ilahay aynu ka wada magan galnay in ay inagu dhacaan, waayo malihin waanay inagu adkaanaysaa in samir iyo kalsooni loo yeesho bulshada dhexdeeda sida ninkaasi.
Hadana iyada oo dhibta intaasi leegi ay haysato, ninkaasi maalin kaliya ma uusan niyad jabin,maalin kaliyana afkisa laga ma maqan kalmado tusiinaaya dadka in uu niyad jabsan yahay, ama ay taabatay imtixaankani.
Ninkaasi waxa uu intii karaankiisa ah iyo kalsoonidii uu muujiyay uu ku hantay in uu wax barto khaasatana uu noqdo ninka kaliya ee wax laga waydiiyo mandaqada uu markaasi ku noolaa ee Maka.
Waxa uu ahaa ninka wax laga waydiiyo arimaha Diinta.Maslamata ibu cabdil malik waxa uu yidhi Cadaa ibnu Rabaax mooyaane wakhtiga Xajka yaan cidkale wax la waydiinin,taasi waxa ay ku tusaysaa kalsoonida halka uu ka gaadhay.
Waxa uu aakhirkii noqday nin ka mid noqda culimada waawayn ee Muslimiinta ee wax la waydiiyo.Waxaa in badan ka waramay Abuu xaniifa, kaasi oo odhan jiray,wali maan arag caalim ka qiimi badan Cadaa ibnu rabaax isaga ayaana wax i baray.
Kalsoonida in sida ninkan oo kale loo helaa maaha mid ku xidhan qofka oo kaliya,balse waa mid ay u baahan tahay in bulshada dadka kuugu dhawi iyaguna ay ku caawiyaan,sida ninkan ay u cawiyeen dadka deegaanka, gaar ahaan culimadii waawayneed ee uu la noolaa ama uu wax ka baranaayay.
Somalida waxaa dhaqan iyo caado u ah, hadiiba ay kugu ogaadaan,kalsoonidaro kaa muuqata ,taasi oo kaaga timi dhibaato ama noloshaada oo ay wax iska badaleen ,waxa laga yabaa in ay niyada kuu dhisaan iska daaye !waxa ay raadinayaan /dabagalayaan/fatashayaan/qodayaan/u-kuurgalayaan /isku mashquulinayan ,sababtii iyo qaabkii ay kalsooni daradu kuugu timi iyo wixii sababta u ahaa ,si ay kuugu cayaan/fadee-xeeyaan.
Waxa ila fiican in dadkeena Somalida ah in niyada iyo qalbigaba la isu dhiso,dhibta iyo is-xaqiraadana la iska dhaafo,xanta,xaasidka iyo isdaba galkana aan laga shaqo dhigan,waayo tan waa aduunyo waana laga tagayaa.Qofkastow ogsoonow Dunidu waa imtixaan, mar ay noqotaba waa ay kusoo maraysaa,waanay kula kulmaysa.